९ दिनमा ‘नाईं नभन्नू ल ५’ को कलेक्सन कति छ ? « Ramailo छ
९ दिनमा ‘नाईं नभन्नू ल ५’ को कलेक्सन कति छ ?
प्रकाशित मिति : Sep 2, 2018
फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ५’ ले बक्स अफिसमा आफ्नो शानदार कलेक्सनलाई जारी राखेको छ । प्रदर्शनको दोश्रो शनिबार पनि हलमा दर्शकको चाप उच्च हुँदा हालसम्म फिल्मले चार करोड तीन लाखको कलेक्सन गरेको यसका वितरक सुनिल कुमार थापा बताउँछन् ।
वितरक मानन्धरका अनुसार गत भदौ ८ गते प्रदर्शनमा आएको ‘नाईं नभन्नू ल ५’ ले प्रदर्शनको ९ दिनमा अल नेपालबाट चार करोड ३० लाखको कमाइ गरेको हो । सर्वाधिक कमाइ गरेको ‘नाईं नभन्नू ल’ को दोश्रो सिरिजलाई पनि पाँचौ श्रृंखलाले जित्ने दाबी वितरक मानन्धरको छ । ‘नाईं नभन्नू ल २’ ले करिब साढे पाँच करोडको कलेक्सन गरेको थियो । अनुभव र सेड्रिना सँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
विकासराज आचार्यको लेखन, निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ५’ मा अनुभव रेग्मी र सेड्रिना शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ । यी दुई बाल कलाकारसँगै फिल्ममा प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्का, अभिषेक नेपालको अभिनय छ । दीलिप रायमाझी र निरुता सिंहको फिल्ममा विशेष भूमिका छन् । अनुभव, सेड्रिना र स्वस्तिमासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :